दृष्टि कमजोरी: कारणहरू – उपचार – Noor Health Life
दृष्टि कमजोरी: कारणहरू – उपचार
1 दृष्टि किन कमजोर हुन्छ?
२ आजकल बालबालिकाले धेरै ठूला चस्मा लगाएको देखिन्छ, के बालबालिकामा दृष्टिविहीनता बढ्दै गएको छ ? यो कमजोरीलाई रोक्न के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ?
3 यसको मतलब के हो कि केहि मानिसहरू सकारात्मक संख्याको लेन्सको बारेमा सोच्छन्, तिनीहरूमध्ये कोही ऋणात्मक संख्याको बारेमा सोच्छन्, जबकि धेरै मानिसहरू एक निश्चित कोणमा संख्याको बारेमा सोच्छन्?
4 के चश्माको नियमित प्रयोगले नम्बर एक स्थानलाई रोक्छ वा यो बढ्दै जान्छ?
5 नियमित चश्मा प्रयोग नगर्दा कस्ता समस्याहरू आउँछन्?
6 कहिले चश्मा लगाउने? नजिक वा टाढा काम?
7 नजिक र टाढाको चस्मा सँगै बनाउनु पर्छ कि अलग?
8 के त्यहाँ चश्मा बाहेक अन्य कुनै दृष्टि कमजोरीको उपचार छ?
9 लेजर अपरेशनले आँखा भित्र के परिवर्तन गर्छ?
10 लेजर उपचार को हानि के हो? अनि के गर्ने ?
11 Phakic IOL के हो र यो शल्यक्रिया कस्ता बिरामीहरूमा गरिन्छ?
किन कमजोर छ दृष्टि ?
नूर हेल्थ लाईफ को साथीले सोध्नु भएको छ भने नयाँ आँखाको बारेमा जानकारी दिदै छु ध्यान दिएर पढेर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। र म तपाईहरु सबैलाई पुन: एक पटक हल्का स्वास्थ्य जीवनलाई सहयोग गर्न र गरिब बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न आग्रह गर्दछु।पैसा भनेको आउन र जाने कुरा हो र कहिले पनि होइन तर गरिबको हक हामी सबैमा छ। तपाईको घरमा बिरामी हुनुहुन्छ र तपाईसँग उसको उपचार गर्न पैसा छैन, तब तपाईको मनमा के हुन्छ तपाई अनुमान लगाउनुहुनेछ। अब थप पढ्नुहोस्।
दृष्टिविहीनताका विभिन्न कारणहरू छन् जस्तै आकार बढ्नु, चोटपटक लाग्नु, मधुमेह मेलिटस आदि तर चालीस वर्ष नपुग्नुअघि नै कमजोरी हुने सबैभन्दा सामान्य कारण भनेको आँखाको संरचना हो।म विविधता खोज्न चाहन्छु। तपाईंले देख्नुहुन्छ कि अल्लाह सर्वशक्तिमानले यसको हरेक पक्षमा धेरै विविधताहरू सिर्जना गर्नुभएको छ। फूलहरू भए रंगीन हुन्छन्, चराहरू भए रंगीन हुन्छन्। त्यसैगरी आँखाको संरचनाले पनि सबैलाई समान बनाउँदैन, यसमा पनि विविधता छ । जब बच्चाको शरीर ठूलो हुन्छ, निस्सन्देह, आँखा पनि विकास प्रक्रिया मार्फत जान्छ। त्यस्तै, धेरै बच्चाहरूको कोर्नियाको तेर्सो र ठाडो वक्र फरक हुन्छ। यी सबै अवस्थामा, पलक माथि बनाइएको छवि धमिलो [फोकस बाहिर], चीजहरू धमिलो देखिन्छ। जब यसलाई विभिन्न तरिकामा तय गरिन्छ, यो स्पष्ट देखिन थाल्छ। यसरी हेर्दा दृष्टिविहीनता कुनै रोग होइन तर यो प्रकृतिको विविधता हो भन्न सक्छौँ जसरी रङको विकृतिलाई रोग भन्न मिल्दैन । यद्यपि, जब यो कमजोरी पहिलो पटक प्रकट हुन्छ, यो व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ।
आजकल केटाकेटीहरूले ठूला चस्मा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।के बालबालिकामा दृष्टिविहीनता बढ्दै गएको छ? यो कमजोरीलाई रोक्न के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ?
वास्तवमा बालबालिकामा दृष्टिविहीनताको प्रकोप बढेको छैन तर रोगका बारेमा जनचेतना बढेको छ । साथै, शिक्षा अनुपात बढेको छ, जसले मूल्याङ्कन अनुपातमा सुधार गरेको छ। पहिले, धेरै बच्चाहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूको आँखा कमजोर छ। जे होस्, कुरानका केहीले पुष्टि गर्दछ कि लामो समयसम्म निकट वस्तुहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले बच्चाहरूको आँखाको ज्योति गुम्ने सम्भावना बढ्छ, उदाहरणका लागि, बच्चाहरूलाई याद गर्नमा, निरन्तर कम्प्युटर गेम खेल्ने बच्चाहरूमा। , र बच्चाहरू जसले धेरै लामो हेर्छन्। टिभी नजिकै बसेर कार्यक्रमहरू।
यसको मतलब के हो कि केहि मानिसहरू सकारात्मक संख्याको लेन्सको बारेमा सोच्छन्, तिनीहरूमध्ये कोही ऋणात्मक संख्याको बारेमा सोच्छन्, जबकि धेरै मानिसहरू एक निश्चित कोणमा संख्याको बारेमा सोच्छन्?
जसको आँखा मानक आकार भन्दा सानो छ उसले सकारात्मक नम्बरको चश्मा लगाएर स्पष्ट देख्न सकिन्छ र जसको आँखा ठूलो छ उसले नकारात्मक नम्बरको चस्मा लगाएर स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जसको कोर्नियाहरू तिनीहरूको तेर्सो र ठाडो गोलाकारहरूमा भिन्न हुन्छन् तिनीहरूलाई एक निश्चित कोणमा सिलिन्डर नम्बर भनिन्छ।
के चश्माको नियमित प्रयोगले नम्बर एक स्थान रोक्छ वा यो बढ्दै जान्छ?
चस्माले रोगको कारण नमेट्ने तर लक्षणको मात्र उपचार गर्ने भएकाले चस्माको नियमित प्रयोगले नम्बर एक हुनबाट रोक्छ भन्ने गलत धारणा बनेको छ। सामान्यतया 18 वर्षको उमेरसम्म आँखाको संरचना परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले चश्माको संख्या त्यतिबेलासम्म परिवर्तन भइरहन्छ, जतिसुकै नियमित रूपमा चश्मा प्रयोग गरे पनि। चस्मा नलाग्दा पनि अन्य धेरै समस्याहरु आउन सक्छन् तर दृष्टि गुमाउनु वा निको हुनु बिल्कुलै गलत हो । सामान्यतया यो उमेर पछि नम्बर एकै ठाउँमा रोकिन्छ, यो प्रक्रिया बाल्यकालमा जारी रहँदा चश्माको संख्या पनि परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले समय-समयमा बालबालिकाको चस्माको सङ्ख्या जाँच गराउनुपर्छ ताकि संरचना परिवर्तन भएजति चस्माको सङ्ख्या पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, चालीस वर्षको उमेर पछि, कपाल सेतो हुन थालेपछि सामान्यतया शरीरमा परिवर्तन आउन थाल्छ। वा यदि पहिलो लेन्स अहिले नै देखिएन भने यो आवश्यक पर्न सक्छ, पहिलो लेन्सको संख्या परिवर्तन हुन थाल्छ, वा नजिक र टाढाको संख्या फरक हुन्छ। पहिले सबै काम एउटै लेन्सबाट हुन्थ्यो, अहिले हुन्न ।
चस्मा नियमित प्रयोग नगर्दा के कस्ता समस्या आउँछन् ?
यो स्पष्ट छैन, जसको लागि आँखाले ध्यान र तनाव गर्नुपर्छ।
बालबालिकाको पढाइ र अन्य कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । मनोवैज्ञानिक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्।बालबालिकाहरूमा टाउको दुख्ने गर्छ जुन कहिलेकाहीँ यति धेरै गम्भीर हुन्छ कि वान्ता पनि हुन्छ।
यदि एउटा आँखा अर्को भन्दा धेरै कमजोर छ भने, कमजोर आँखाको विकास बिग्रन्छ। मस्तिष्कले त्यो आँखाबाट प्राप्त जानकारीलाई अवशोषित गर्न सक्दैन र मस्तिष्कको त्यो भागको विकासमा समेत बाधा पुग्छ, यो अवस्थालाई एम्बलियोपिया भनिन्छ। यदि यो बाह्र वर्षको उमेर अघि पत्ता लगाइयो भने, लगभग 100% निको हुन सक्छ, तर पछि यो निको हुन असम्भव हुन्छ।
यो दोष भएको आँखा धेरै मानिसको चर्को हुन्छ । यो दोष बाल्यकाल र बुढेसकालमा देखिन सक्छ।
काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै धेरै मानिसमा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि देखापर्छ ।
चश्मा कहिले लगाउने? नजिक वा टाढा काम?
चालीस वर्षको उमेर अघि देखिने कुनै पनि नम्बर प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ (चाहे सकारात्मक होस्, नकारात्मक होस् वा बेलनाकार होस्)। केवल दूरी वा नजिकको लागि मात्र आवश्यक छ।
नजिक र टाढाको चस्मा सँगै बनाउनुपर्छ कि छुट्टाछुट्टै ?
यसको काम र आवश्यकतासँग धेरै सम्बन्ध छ। त्यहाँ तीन प्रकारका चश्माहरू छन् जुन विभिन्न दूरीहरूमा काम गर्दछ: द्विफोकल ट्राइफोकल र मल्टिफोकल।
के त्यहाँ चश्मा बाहेक अन्य दृष्टि कमजोरी को लागी कुनै उपचार छ?
धेरै कम मानिसहरु छन् जसको दृष्टि कुनै कारणले कमजोर भएको छ वा यसको पछाडि मधुमेह जस्तै निको नहुने कारण छ, तर, निद्रा एपनिया, विशेष गरी लिम्बल कन्जुक्टिवाइटिस, यो एक प्रकारको एलर्जी हो। औषधिबाट पक्कै फाइदा हुन्छ तर यस्ता मानिसलाई चस्माबाट पनि फाइदा हुँदैन ।मायो पिठक वा अन्य कुनै प्रिस्क्रिप्शन कम आएको छ ।धेरै मानिस आएका छन् कि मैले उपचार गरेको छु ।हेर्नुस् कत्तिको फरक भयो ? जाँच गर्दा, संख्या पहिले जस्तै जस्तो देखिन्छ, तर लक्षणहरू निश्चित रूपमा दबाइएका छन्। सम्भवतः उदाहरणका लागि लेजर प्रत्यारोपण, फाको अपरेशन, फाकिक आईओएल, कोर्निया भित्र कोर्नियल रिंगहरू फिटिंग। यद्यपि, यो तथ्य हो कि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको र परीक्षण विधि लेजर हो।
लेजर अपरेशनले आँखा भित्र के परिवर्तन गर्छ?
किनभने कोर्नियाको गोला परिवर्तनले प्रकाशलाई फोकस गर्ने क्षमतालाई परिवर्तन गर्न सक्छ, लेजरले कोर्नियाको बाहिरी सतहको गोला परिवर्तन गर्दछ। लेन्सको आकारमा निर्भर गर्दै, केही भागहरू धेरै गोलाकार बनाइन्छ र केही भागहरू कम गोलाकार बनाइन्छ। यस परिवर्तनको परिणाम स्वरूप, विभिन्न वस्तुहरूबाट परावर्तित प्रकाश रेटिनामा ठीकसँग केन्द्रित हुन थाल्छ र आँखाले कुनै पनि समर्थन बिना स्पष्ट रूपमा देख्न थाल्छ (जस्तै चश्मा वा कन्ट्याक्ट लेन्स आदि)। निम्न चित्रहरूमा, यो अपरेशनको प्रक्रिया वर्णन गरिएको छ।
लेजर उपचार को हानि के हो? अनि के गर्ने ?
उपचारको नतिजा थोरै संख्याको लागि उत्तम हुन्छ, तर यदि संख्या धेरै बढी छ, जस्तै सोह्र वा सत्रह, लेजरको सट्टा फाकिक आईओएल विधि प्रयोग गरिन्छ र त्यो पनि धेरै सफल छ। निस्सन्देह, यदि कसैको आँखामा पहिले नै रोग छ जुन स्थायी रूपमा निको हुन सक्दैन भने, त्यहाँ हानि हुन सक्छ, जस्तै कोर्नियाको पुरानो रोग, यदि कोर्निया निरन्तर सुन्निएको छ, आदि। स्वस्थ आँखाको लागि यो उपचार धेरै उपयोगी छ। जहाँसम्म जोखिमको सवाल छ, यो तथ्य हो कि यो उपचार एकदमै सरल र सुरक्षित छ। महँगो मात्र हो किनभने यसको मेसिन र अन्य सामानहरू धेरै महँगो छन्। यो गर्नु राम्रो कुरा हो, र यो त्यहाँ समाप्त हुनुपर्छ। यसले के लिन्छ? १८ देखि ४० वर्षको हुनुपर्दछ, योजना बनाउनुहोस्, यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पहिलो स्थान दिनुहोस् र केहि विशेष नचाहनुहोस्। दस देखि पन्ध्र मिनेट लाग्छ, केवल दुई वा तीन दिन पछि।
फाकिक आईओएल के हो र यो शल्यक्रिया कस्ता बिरामीहरूमा गरिन्छ?
यो एउटा लेन्स पनि हो जसलाई तपाईले कन्ट्याक्ट लेन्स र IOL लाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो शल्यक्रिया गरेर आँखा भित्र जडान गरिएको छ, तर यसलाई फिट गर्न प्राकृतिक लेन्स हटाइएको छैन, शल्यक्रिया पछि, बिरामीको आँखामा दुईवटा लेन्स छन्, एउटा प्राकृतिक र अर्को कृत्रिम। तलको चित्रमा देखाइए अनुसार यसका दुई प्रकार छन्। यो लेन्स धेरै उच्च लेन्स गणना भएका र लेजर शल्यक्रिया नगर्ने मानिसहरूका लागि उत्तम हो।
दृष्टि कमजोरी कसरी हटाउने?
उमेर बढ्दै जाँदा आँखाको ज्योति कमजोर हुन थाल्छ र चस्मा लाग्न थाल्छ । तर, आफ्नो आँखाको छालामा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यो एक चुनौतीपूर्ण काम जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो होइन। तपाईं आफ्नो उमेर बढ्दै जाँदा आफ्नो दृष्टि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
कमजोर आँखाको लक्षण
भनिन्छ निको भन्दा सावधानी अपनाउनु उत्तम हुन्छ ।आफैमा निम्न लक्षण देखिए तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् ।
हाम्रो आँखाले लेन्सको रूपमा काम गर्दछ, जसले विभिन्न दूरीमा वस्तुहरू हेर्न आफैलाई समायोजन गर्दछ। तर जब तपाईलाई टाढाबाट चीजहरू हेर्न गाह्रो हुन्छ, आँखाले अलिकति कडा परिश्रम गर्नु पर्छ, जसले दुखाइ, थकान, आँखा पानी वा सुख्खापन जस्ता लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ।
आँखामा दबाब वा तनावले टाउको दुख्ने कारणले गर्दा आँखाले आफ्नो काम गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आँखा वरिपरि दुख्ने, विशेष गरी किताब पढ्दा, कम्प्युटरमा काम गर्दा वा बोर्ड हेर्दा। जब आँखाले चीजहरू हेर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, मांसपेशीहरू कडा मेहनत गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले टाउको दुख्ने गर्दछ। यदि तपाईं ध्यान दिएर केहि गर्दै हुनुहुन्छ भने, पन्ध्र देखि तीस सेकेन्डको ब्रेक लिनुहोस्।
आँखा कम गर्नुहोस्
यदि तपाइँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाइँको पलकहरू थोरै बन्द गर्नुको अर्थ तपाइँको आँखाको ज्योति बिग्रिएको छ। आँखा निचोर्दा राम्रोसँग हेर्न मद्दत गर्छ, तर लामो समयसम्म त्यसो गर्दा दृष्टि खराब हुन सक्छ, साथै टाउको दुखाइ पनि हुन सक्छ।
उज्यालो प्रकाशमा हेर्न गाह्रो
यदि उज्यालो उज्यालोमा आँखा डगमगाउन थाल्छ भने, यसको मतलब दृष्टिमा कमजोरी भएको छ, किनकि यो चम्किलो प्रकाशले आँखालाई संकुचित गर्न बाध्य पार्छ, जसको परिणाम स्वरूप उनीहरूलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्क्रिन प्रयोग कम गर्नुहोस्
फोन वा कम्प्यूटर स्क्रिनको प्रयोगको अवधिले पनि दृष्टिलाई असर गर्न सक्छ, दिनमा दुई घण्टा वा बढी डिजिटल स्क्रिनमा हेरिरहँदा डिजिटल आँखा तनाव हुन सक्छ। यसले आँखामा रातो हुने, चिलाउने, सुख्खापन, धमिलो हुने, थकान र टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसबाट बच्नको लागि स्क्रिनको प्रयोग रोक्न आवश्यक छ।
धुम्रपानले हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदा दृष्टि हानि र अप्टिक नर्भमा क्षति पु¥याउँछ । साथै, मधुमेहले पनि आँखाको समस्या निम्त्याउँछ।
आँखाको स्वास्थ्यका लागि जाँच गराउने बानी बसाल्नु जरुरी छ ।यस बानीले आँखाको जुनसुकै समस्यालाई सुरुमै समातेर सजिलै हटाउन सकिन्छ । यदि तपाईलाई बारम्बार टाउको दुख्छ भने, केहि पढेपछि तपाईको आँखा थकित हुन्छ, तपाईले केहि हेर्नको लागि यसलाई संकुचन गर्नु पर्छ वा तपाईले नजिकैको किताब पढ्नु पर्छ – यो सबै कमजोर दृष्टिको परिणाम हुन सक्छ।
तपाईका दुई आँखाले दुईवटा छवि बनाउँछन्, जसलाई मस्तिष्कले एकमा मिलाउँछ, तर जब एउटा आँखाको दृष्टि बिग्रन्छ, मस्तिष्कमा बन्ने छवि ठीक हुँदैन, जसले तपाईलाई बिरामी महसुस गर्न सक्छ। विज्ञहरुका अनुसार यस्तो अवस्थामा मस्तिष्कले दुई फरक तस्बिर देख्छ र उनीहरुलाई जोड्न गाह्रो हुन्छ ।
आँखाको ज्योति तेज बनाउन उपयोगी खानेकुराहरु
दृष्टि प्रकृतिको अमूल्य वरदान हो, जसलाई हामीले निम्न खानेकुरा खाएर जोगाउन सक्छौँ ।
भिंडीमा zeaxanthin र lutein जस्ता यौगिकहरू पाइन्छ, जसले आँखाको ज्योति बढाउन मद्दत गर्छ। भिंडीमा भिटामिन सी पनि उच्च मात्रामा पाइन्छ, जुन आँखाको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ।
उमेर बढ्दै जाँदा आँखाको ज्योति कमजोर हुँदै जान्छ तर बिटा क्यारोटिनले आँखाको ज्योति राम्रो बनाइराख्न मद्दत गर्ने चिकित्सकहरू विश्वास गर्छन्। भिटामिन सी, भिटामिन ई, जिंक र तामाले भरिपूर्ण खानेकुरा दैनिक खाँदा आँखाको ज्योति बढ्छ भन्ने पनि बताइएको छ । यी सबै पोषक तत्व खुबानीमा पाइन्छ, जसले दृष्टि धमिलो हुने जोखिमलाई २५% ले कम गर्छ।
गाजरमा भिटामिन ए पाइन्छ जसले आँखाको झिल्ली र अन्य अंगहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्छ।गाजरको दैनिक प्रयोगले आँखाको ज्योति पनि बढाउँछ।
लुटेन एक एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसले आँखाको ज्योति बढाउन मद्दत गर्छ। बन्दाकोबीमा भिटामिन सी र बिटा क्यारोटिन पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जुन निकै फाइदाजनक पनि हुन्छ ।
फलफूल खान कस्लाई मन नपर्ला र ? जाडो नजिकिँदै गर्दा फलफूलको लालसा बढ्दै गएको छ । बदाम, अखरोट र काजू जस्ता फलफूलमा ओमेगा–३ फ्याटी एसिड बढी हुन्छ । यसले पलकहरूलाई उज्यालो प्रकाशसँग लड्न बल दिन्छ र उमेरसँगै हुने आँखाको समस्यालाई रोक्न मद्दत गर्दछ। थप प्रश्न र उत्तरहरूको लागि तपाईले नूर हेल्थ लाइफलाई ईमेल र व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com